Yan Aung: ဘလော့ဂ်စာအုပ်အတွက် နာမည်ပေးခြင်း
ဖိုရမ်မှာ ဘလော့ဂ်စာအုပ်အတွက် နာမည်ပေးပွဲကြီး စတင်နေပါပြီ. ခုထိပေးထားတဲ့ နာမည်လေးတွေကို Vote လုပ်လို့ရအောင် Poll တစ်ခု ဖန်တီးထားပါတယ်.စာမူဘလော့ခ် မှာ သွားရောက် မဲပေးနိုင်ပါတယ်။ နာမည်အသစ်လေးများထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်စွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
ပေးထားတဲ့ နာမည် တစ်ချို့ထဲက သဘောကျတဲ့ နာမည်လေးတွေကို ထုတ်နှုတ်ဝေဖန်ပြချင်ပါတယ်.
တတိယလှိုင်း၏ ရင်ခုန်သံများ... မြင်လိုက်တာနဲ့ စာအုပ်လေးကို ကောက်ကိုင်ချင်လောက် အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့် ရင်ခုန်သံများဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တစ်ချို့သော ဖိုရမ်မာများက (ရင်မခုန်တတ်သူ အပျိုကြီး မမများက) သိပ်ရင်မခုန်လို့ မကြိုက်ဘူးပြောနေတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ တစ်ယောက်သော ဖိုရမ်မာက ရင်မခုန်မယ့်အတူတူ၊ ဘလော့ခ်ဂါတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့က အဓိကပဲဆိုပြီးတော့ အောက်ပါနာမည်ကို ဆက်ပေးပါတယ်။
တတိယလှိုင်း၏ အန်ဖတ်များ.. စိတ်ပညာအရကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. စိတ်ဝင်စားမှု ရဖို့ သေချာပါတယ်. ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရမှာလည်း သေချာသလို အပယ်ခံရဖို့လည်း သေချာပါတယ်. ဆင်ဆာလူကြီးမင်း ထမင်းစားခါနီးမှာ ဖတ်လိုက်ရရင်တော့ စာမူတွေကိုပါ ရေနဲ့လောင်းချကိန်း ရှိပါတယ်.
ကိုယ်ရေးမှန်ကူကွက်များ... မှန်ကူကွက်များ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးက ရိုးရှင်းပေမယ့် လှပပါတယ်. နည်းနည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆန်သွားတဲ့ နာမည် တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။ “သူရေးမှန်ကူကွက်များ” ဆိုရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ “သူရေးကိုယ်ရေး” ဆိုရင်လည်း ပိုရှုပ်ကုန်ပါမယ်။ မှန်ကူကွက်များကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ သာကူကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် သတိရစရာလေးတွေ ဖြစ်လာလို့...
မြန်မာဘလော့ခ်ဂါ ရပ်ဝန်း...ဆုံစည်းတယ်ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်လေး ပါနေတဲ့အတွက်ရယ်၊ ဘလော့ခ်ဂါဆိုတဲ့ တိုက်ရိုက် ကိုယ်စားပြု ဝေါဟာရ ပါလို့ရယ် ရိုးရှင်းကောင်းမွန်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကဗျာ စာအုပ်နာမည် ဆန်နေပါတယ်. စကားပြေဆန်အောင် ပေးလို့တော့ရပါတယ်. “မြန်မာဘလော့ခ်ဂါများ ဆုံတွေ့ကြသည့်နေရာ” လို့ ပေးလိုက်ရင်လည်း ဘယ်နေရာလဲဆိုပြီးတော့ အဲဒီ့နေရာကို ၀ိုင်းတွေရဲကြတော့မှာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်။
နည်းပညာခေတ်၏ ပဲ့တင်သံ... နည်းပညာခေတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုက လူတန်းစား ခွဲခြားလိုက်တဲ့ sense လေးနည်းနည်း ပါသွားတယ်. တော်ရုံတန်ရုံလူ ကောက်ကိုင် မကြည့်တော့ဘူး. ငါတို့ အပိုင်း မဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားတယ်. ဒါပေမယ့် “ပဲ့တင်သံ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သဘောကျတယ်. “ခေတ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုလည်း နှစ်သက်မိပါတယ်.
ခေတ်တစ်ခေတ်၏ စာမျက်နှာများ... ဆင်ဆာအဖွဲ့ မျက်စိကျနိုင်ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမိုင်းစာအုပ်နည်းနည်းဆန်နေတာကြောင့် အထဲမှာ ဘာတွေ ရေးထားမလဲဆိုပြီး သေသေချာချာကို ပိုက်စိပ်တိုက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်. ပြီးတော့ နည်းနည်းရိုးစင်းနေပါတယ်.
မှတ်တိုင်များ၊ ရက်စွဲများ...စတဲ့ နာမည်လေးတွေက ရိုးရှင်းလှပပါတယ်။ ဘလော့ခ်ဂါတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာ မှတ်တမ်းများကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အထဲမှာ ပါဝင်မယ့် စာမူတွေကို ကိုယ်စားပြုရာမှာ နည်းနည်းအားနည်းနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်. မှတ်တိုင်များဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေး ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ရန်ကုန်ပရိသတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အတော်အတန်ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်မှာက မဲခွဲစနစ်နဲ့ပါ. ကျွန်တော်ဘာကြောင့် ဒီလိုဝေဖန် ဆန်းစစ်ပြရတာလဲဆိုတော့ ဘလော့ဂ်ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမတို့တွေ idea နည်းနည်းပိုရလာစေချင်လို့ပါ. အားမနာတမ်း ဝေဖန်မှ quality ပိုတက်လာမယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်လေ. ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စုပေါင်းထုတ်ဝေမယ့် စာအုပ်လေးရဲ့ ကောင်းကျိုးပါပဲ. ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ နာမည်ကိုလည်း အားရပါးရ ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်..
ခုထိတင်ပြခဲ့တဲ့ နာမည်လေးတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ စကားလုံးလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်
ခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို မူတည်ပြီးတော့လည်း နာမည် အမျိုးမျိုးကို Generate လုပ်နိုင်ပါတယ်....အသစ်လေးတွေကိုလည်း ထပ်မံ တင်ပြ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.....
၁. ရင်ခုန်သံတို့၏ ဆုံမှတ်များ
၂. ဘလော့ခ်ဂါတို့၏ အရိုးတွန်သံ
နံပါတ် ၂ ကို ဂျပန်က YAMAMIN က သဘောကျလို့ copyright ၀ယ်ထားပါတယ်. YAMAMIN ကို ၃ ခေါက် လောက် အသံထွက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကောင်းကောင်းရင်းနှီး တဲ့ နာမည် တစ်ခုပါပဲ. နာမည် အကောင်းဆုံးရွေးနိုင်တဲ့သူကို ဆုချပါမယ်. ဖားကန့်၊တောမှော်၊လုံးခင်၊ဟောင်ပါးဆိုတဲ့ ကျောက်စိမ်းထွက်တဲ့ ဒေသတွေကို လေ့လာရေး ခရီးလွှတ်ပေးမယ့် အပြင် L Sai Zee၊ L Lun War၊ Rebecca Win တို့နဲ ကချင်မနောပွဲမှာ Rap သီချင်းဆိုပြီး တွဲကခွင့်ပေးမယ့် အပြင် ခေါင်ရည် အတူတူသောက်ခွင့်လည်း ပေးပါမယ်. ငှက်ဖျားဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လို့ H5N1 ကို ရန်ကုန်က မထွက်ခင်ကတည်းက ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် ထိုးပေးလိုက်ပါမယ် ခင်ဗျာ.
ဖိုရမ်ကိုသွားချင်ရင် ဒီကို နှိပ်ပါဖိုရမ်ထဲကိုရောက်သွားရင်တော့ Forum Index>General>Lobby ထဲကိုသွားပါ။ အဲဒီ့ထဲမှာ ဘလော့ဂ်စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ Topic ၃ ခု ရှိပါတယ်. ၁. Creative Name For Myanmar Blogger Book ၂. Creative Design For Myanmar Blogger Book ၃. Publishing Myanmar Blog Book (General Discussion) တို့ဖြစ်ပါတယ်. ကြိုက်တဲ့ Topic အောက်ဝင်ပြီး ကြိုက်သလို ဆွေးနွေးပါ. ပျင်းလာရင်တော့ Chicken Soup Corner ထဲမှာ Ebook တွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ကာတွန်းတွေ၊ Jokes တွေ သွားဖတ်ပါ။ နည်းပညာပိုင်းသိချင်ရင်တော့ Template Design တွေ၊ Coding ပိုင်းတွေ သွားဖတ်ပါ. မိတ်ဆက်ချင်ရင်တော့ community ကိုသွားပါ. ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ email ပို့လိုက်ပါ။ မအားလည်း စာပြန်ပါတယ်။ “မအားသေးဘူး” လို့....
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတဲ့ နာမည်ပေးရေး ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုညီညီ(သံလွင်) က အကြံပြုဆွေးနွေးပါတယ် ခင်ဗျာ.ဘာလဲဆိုတော့ တတိယလှိုင်းနဲ့ တတိယ ကမ္ဘာ မတူညီဘူးဆိုတာပါပဲ.
တတိယကမ္ဘာဆိုတာ အာရှနိုင်ငံတွေကို ကိုယ်စားပြုတာမှန်ပေမယ့် တတိယ လှိုင်းဆိုတာကတော့ Post Industrial Society ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်တဲ့. ဒါကြောင့်မို့ တတိယလှိုင်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ဖယ်သင့်မဖယ်သင့် ပြုပြင်သင့်၊ မပြုပြင်သင့် ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ် ဖိုရမ်မာတို့ရေ...
* Third Wave is the post-industrial society. Toffler would also add that since late 1950s most countries are moving away fromaSecond Wave Society into what he would callaThird Wave Society. He coined lots of words to describe it and mentions names invented by other people, like the Information Age, which predicted demassification, diversity, knowledge-based production, and the acceleration of change (one of Toffler’s key maxims is "change is non-linear and can go backwards, forwards and sideways").
ခုလိုမျိုး အမှားတစ်ခုကို ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုညီညီ...